Xildhibaan dalbaday in xisbiyada dalka ka jira laga talo geliyo sharciga doorashooyinka – Kalfadhi
Xildhibaan dalbaday in xisbiyada dalka ka jira laga talo geliyo sharciga doorashooyinka
Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi oo kamid ah xildhibaannada Golaha Shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in aysan suurtagal ahayn in la meel mariyo sharciga doorashooyinka iyada oo aan laga tallo gelin xisbiyada ka jira waddanka.
Axmed Macallin Fiqi ayaa intaasi ku daray in maamul gobolleedyada ay sido kale xuquuq u leeyihiin in lagala tashadaa shuruucda inta aan la sameyn ka hor.
‘’ Waxaa jira xisbiyo siyaasadeed oo diiwangashan,waa in ay talo ku yeeshan ka hor inta aan loo gudbinin Baarlamaanka Soomaaliya.’’ ayuu Xildhibaan Fiqi u sheegay telefishinka GoobJoog.
Xildhibaanka ayaa sido kale madaxweyne Farmaajo ku dhaliilay in uu doonayo in xisbigiisa iyo aragtidiisa uu ku jaan gooyo shuruucda la sameynayo.
Qaar kamid ah xisbiyada dalka ka jira ayaa sido kale arrintan ka hadlay.
Guddoomiyaha xisbiga Wadajir Kamaal Guutaale ayaa sheegay in sharcigan aysan xibsiyada ku lahayn wax wada tashi ah.
REYSAL WASAARE KHEYRE OO SHEEGAY IN LAGU HISHIIYEY QAABKA DOORASHADA SOOMAALIYA